ဥ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဥ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ဥ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Mar 24, 2014 in Community & Society, Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 71 comments
ဥ ကို ချက်နည်းမျိုးစုံ ရေးမို့။
ဟင်းအရံမှာတော့ သုံးနည်းတွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ မိန်းဒစ်(ရှ) အနေနဲ့ စုထားချင်လို့ ရေးတဲ့ ပို့(စ) ပါ။
(နာ ကွ!၊ တဂျီး ဆီ က ပွိုင်ကို မရအရ နည်းနဲ့ ယူတယ်မှတ်)
၇ ရက်စာသာမက သိသလောက်ရေးဦးမှာ။ သိပြီးသား ဆိုလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်သွားကြနော်။ အနော့ စားဖိုမှူးတွေနည်းထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ဥ တွေပါ ဆွဲထုတ်သွားမှာ။ ဟင်းချက်နည်းပြောပါတယ်။
ဥ ဆိုလို့ အထင်မသေးကြနဲ့။
ဥပေါ် ကျောက်ပြင်ကျလဲ ဥပဲ ကွဲတာ။ ကျောက်ပြင်ပေါ် ဥကျလဲ ဥပဲကွဲတာ။
(အဲလေ၊ နာ ဘာတွေပြောနေမိပါလိမ့်)
သများ ဥ (ဟင်းချက်နည်း) ပို့(စ) မှာ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေတော့ လာမပြောနဲ့။
အဲဒါက ဝေ့ နည်းထဲက ယူမှာ။
၀က်သားကြိတ်ပြီးသား (စီးတီးမတ်မှ) ၁၅၀၀ ကျပ်ဖိုး (အလေးချိန်မမှတ်မိတော့လို့ပါ)
ငုံဥ …………. ၁၅ လုံး
၀က်သားထဲထည့်နယ်ဖို့အတွက် … ဆား၊ သကြား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ကော်မှုန့်၊ တရုတ်မဆလာ (သို့မဟုတ်) ငရုတ်ကောင်းမှုန့်
ကြက်ဥ …. တစ်လုံး
ပေါင်မုန့်ခြောက်မှုန့် (အပေါ်ယံအပွဖြစ်လိုလျှင် သုံးနိုင်သည်)
ငုံးဥများကို အရင်ပြုတ်ပြီး အခွံခွာထားပါမယ်။ ကြိတ်ပြီးသားဝက်သားထဲကို ဆား၊ သကြား၊ ညက်အောင်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းအနဲငယ်၊ ကော်မှုန့် စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ အနံ့အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တရုတ်မဆလာမှုန့် သို့မဟုတ် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ထည့်ပါမယ်။ ခေါက်ထားသောကြက်ဥတစ်လုံးမှ တစ်ဝက်ခန့်ထည့်ပြီး အားလုံး သမအောင်ရောနယ်ပါမယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက် နှပ်ထားပြီးနောက် ၀က်သားလုံး လုံးပြီး ကြော်ပါမယ်။ ငုံးဥပြုတ်ကို ဂျုံမှုန့်နဲ့ ခပ်ပါးပါးကပ်လိုက်ပြီးမှ ၀က်သားလုံးနဲ့ အပေါ်က လုံးအောင် ကပ်ပါမယ်။ ပြီးရင် ကြက်ဥခေါက်ထားတဲ့အရည်ထဲ ခဏနှစ်လိုက်ပြီး ပေါင်မုန့်ခြောက်မှုန့်ကပ်ပြီး ဆီပူအိုးထဲထည့်ကြော်ပါတယ်။ ဆီကို ၀က်သားလုံးမြုပ်အောင်ထည့်လျှင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ နီညိုရောင်ဖြစ်လာလျှင် ဆယ်ပြီး ပန်းကန်ထဲ ထည့်လို့ရပါပြီ။
တွဲဖက်စားဖို့ အချဉ်အတွက် နှစ်သက်ရာ ပြုလုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အိမ်မှာလုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းထားတဲ့ထဲကို သံပုရာသီးညှစ်ထည့်ပြီး ဆား သကြားအနဲငယ်ထည့်ထားတဲ့အချဉ်နဲ့ တွဲဖက်စားလေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒါကို ဘာနဲ့တွဲ သောက် (အဲလေ) တွဲစားရမယ် ဆိုတာတော့ ကွကိုယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့နော်။
ကျနော် ဆိုရင် ထမင်း ဆီဆမ်း ဆားဖြူးနဲ့ ဒီဟင်းနဲ့ကို ဖြစ်တယ်။
ကိုဖက်ကက်နည်းထဲက ယူလိုက်မယ်။ လာလေ့!! :-DD
(ဘဲဥချဉ်ရည် ပိုလွယ်တဲ့ နည်းးးး)
ဘဲဥကိုပြုပ် အခွံခွါ ထက်ခြမ်းခြမ်း
ငံပြာရည် အရသာမှုန့် ခပ်
ကျောက်(စ) ရဲ့ ဥ အလှည့်။ ဥ ချက်နည်းကိုပြောတာ။
ဘာကျွေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ ဥ ဟင်း ပေါ့ဗျာ။ ဟေ့လူ… စာတွေး တွေးပါဗျ၊ ကျုပ်ပြောတာ ကြက်ဥ ဘဲဥ။ လမ်းကြုံလို့ပြောရဦးမယ် ကြက်ဥ ဘဲဥ လတ်ဆတ်ရင် အကာသားက ပိုချွဲပြီး အနှစ်ကပျော့တယ်ဗျ၊ ကြာသွားရင် အနှစ်က ပိုမာပြီး အကာက ကျဲသွားတယ် အခွံခွါရတာတော့ ပိုလွယ်တာပေါ့။
ဘယ်သူ့ ဥမှ မရှိတော့။ ကေဇီမှာလည်း ဥ (ချက်နည်း) ကောင်းကောင်းမရှိ။
အဲဒီတော့ ဟိုမေးဒီမေး မေးလိုက်တာ။ တစ်နည်းထွက်လာတယ်။ ဘလော့ကာ ဖိုးစိန်ရဲ့ ဖဘ က မလာတာ။
ဒီဥဟင်း ဖြစ်လာဖို့ ပုစွန်ခြောက်ရဲ့ အကူအညီအများကြီးလိုပါတယ်။
ပုစွန်ခြောက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ နဲ့ ရောထောင်းပြီး ငရုတ်သီးခြောက်ကို ရေစိမ် ရောထောင်း ပြီး ဆီသတ်ပါတယ်။ မာဆလာ ကို ထည့်ပါတယ်။
ပြီးရင် မန်ကျည်းအနှစ် ကို ရေဖျော်ထားတာကို ဆီသတ်ထားတာ မွှေးလာရင် ငံပြာရည်နဲ့ အတူ လောင်းထည့် လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ဥ ကို ဓားမွှန်းထားတာကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဥကို အခွံမာတဲ့ထိ ကျက်အောင် ဆီပြန်ရေကျန် ထည့်ပါတယ်။
ဆီပြန်လာရင် နံနံပင်လေး အုပ်လိုက်ပါတယ်။ အနှစ်က ထမင်းပူပူ ပျော့ပျော့လေးနဲ့ နယ်စားရင် အရမ်း အရသာ ရှိပါတယ်။
အလိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ သခွားသီး အတုံးလေးတွေကို ကိုက်စားပေါ့လေ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အမေချက်တဲ့ ဥဟင်းထဲ ဘာထည့်လဲ ဆိုလား အမေက အိမ်ကိုလာတဲ့ သူတိုင်းကို ပြောပြလေ့ရှိတယ်။
သိချင်ရင်တော့ အိမ်လာလည်ပေါ့လေ။ ဥဟင်းနဲ့ ထမင်းကို နယ်ကျွေးပါမယ်။
ဒါနဲ့ ဥဟင်းက လူကို မ၀ စေပါဘူး နော်။
ဒီခါတော့ သများရဲ့ ဥ ကလှည့်။
ကြက်ဥ ကီးမားလေ။ ညင်းညင်းးးး
ကိုယ့်အလှည့်ကျ အရမ်းလွယ်တယ်လို့ မပြောနဲ့နော်။ ကိုယ်ချက်တတ်တာ ဒါပဲရှိတာ။
ကြက်ဥ ကို ပန်းကန်လုံးထဲ ဖောက်ထည့်။
ပုဇွန်ထုတ် ကို ပါးပါးလှီးထည့်
ခရမ်းချဉ်သီး သေးသေးနုပ်နုပ်လေးတွေ စဉ်းထည့်
ဆားထည့်၊ ဆနွင်း နည်းနည်းလေးထည့်
ပြီးတော့ မီးအေးအေးပေါ် ဖရိုင်းပန် အပြား တင်။
ပြီးရင် ခလောက်ထားတာကိုအိုး အနှံ့လောင်းချ။
တစ်ဖက်ပြီးတစ်ပက် နီရဲ နေအောင်သာကြော်။
လုပ်တတ်ရင် စားဖိုမှူးကြီးတွေလို ပန် ကို မြှောက်ပြီး တဖက်လှန်လိုက်ပါဦးးး
(အောက်ပြုတ်ကျရင် ကေဇီ တာဝန်မပါ)
အဲလာ ရလာပြီ ဆိုရင် ဘူးသီး ဟင်းခါးလေးရယ်၊ ငါးသလဲထိုးကြော်လေးနဲ့ စားတော့။
ဒီ နည်းကတော့ အပျင်းထူမ နည်းနည်း အားမှ ချက်တဲ့နည်းးးးး
ကြက်ဥကို ဆီများများနဲ့ ဟပ်ဖရိုင်း ကြော်ထားလိုက်။ ပြီးရင် ဆယ်ပြီး ပန်းကန်ပြားထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။
အနှစ် မပေါက်ရင်၊ အနှစ်ခဲမသွားရင် ပိုလှပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးတောက်တောက်စဉ်းးး စတာတွေကို ဆီသတ်။
နည်း နည်း ဆီပြန်လာရင် ရေ အရင် ထည့်လိုက်။ အဲဒါမှ အနှစ်ထွက်လာတာ။
ဆီနဲ့ ရေ ရောပြီး အနှစ် ထွက်လာရင် ခုနကကြော်ထားတဲ့ ကြက်ဥလေးတွေ ထည့်လိုက်တော့။
ပုံမပျက်အောင် သတိထားပြီး ဟင်းအနှစ် နှံ့အောင်လုပ်။
ဆီပြန်ကာနီးမှ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ဖင်ခွဲ ထည့်။ မဆလာ အနံ့ကြိုက်ရင် ထည့်လို့ရပါပြီ။
ပဲပုပ်ထောင်းလေးရယ်၊ သီးစုံ ဟင်းလေးရယ်နဲ့ စားပြီး အိပ်လိုက်ပါတော့။
ကေဇီ ပို့(စ) တင်ဖူးတဲ့ ဘဲဥ ငုတ်တုတ်နည်းးး
ငရုတ်သီးခြောက်ကို ရေစိမ်ထားးး၊ အစပ်ကြိုက်ရင် များများစိမ်ထားလိုက်
ပြီးရင် ညက်အောင် ထောင်း တစ်ပုံပုံ။
ချင်းးး၊ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ကို ညက်နေအောင်ထောင်းးးးထား တစ်ပုံပုံ။
ပုဇွန်ကို ရေဆေးးးးး အခွံသင်၊ ချီးကြောင်းထုတ်၊
ပြီးရင် ဆနွင်း၊ ငံပြာရည်၊ ဆား နဲ့ နယ်ထားလိုက်၊ နှပ်ထားလိုက်။
ဘဲ (အဲ) ကြက်ဥကို ပြုတ်၊ ထက်ခြမ်း ခြမ်းးးးး
ဒီမှာတော့ ပုဇွန်သေးသေးလေးနဲ့ လိုက်အောင် ၄ ခြမ်း ခြမ်းပလိုက်တယ်။
ဆီအိုးးး ကျက်ရင် အဲဒီ ဥပြုတ်ခြမ်းကို ကြော်ထားလိုက် (အနှစ် အကာ မကွဲစေအောင်ရော၊ အရသာပိုရှိတာရော)
အဲ ဆီနဲ့ပဲ ထောင်းပြီး ပုံထားတဲ့ ဟာတွေ ကို ဆီသပ်၊ ပြီးရင် ပုဇွန်နှပ်ထားကို ထည့်ချက်၊
ပုဇွန်က ရေထွက် လာရင် ခုနက ဥပြုတ်ခြမ်းကြော်ကို ထည့်ပြီး ပုံမပျက်ရုံ မွှေပေးပါ။
ပြီးရင် ခူးခါနီးမှ မဆလာ လေး အုပ်လိုက်။
အင်မတန်ကို ခံတွင်းလိုက်မဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီ။
ဝက်သား အခေါက်နဲ့ မျှစ်ချဉ်၊ ငရုပ်သီးဆားထောင်း၊ကိုက်လန် အစိမ်းကြော်၊ နဲ့ စားလို့ရပါပြီ။
အကြံကုန်ပြီ။ အဲဒီတော့ သိသမျှ စားနည်းတွေ ပြောမယ်။
၁) ဥ ကို ပြုတ်ပြီး ပါးပါးလှီး သုပ်စားလည်း ရတယ်။
၂) ထမင်းကို ကြက်ဥနှစ် နဲ့ ဆီရယ် ဆားရယ် နယ်ပြီး အကာရယ် မြေပဲဆံကြော်လေး နဲ့ စားလည်း ထမင်းမြိန်တာပဲ။
၃) ကြက်ဥကို ပြုတ် ပါးပါးလှီးပြီးမှ ကျွပ်နေအောင်ကြော်စားလည်း စားလို့ကောင်းတယ်။
၄) မကြက်တကြက်ပြုပ်ပြီး ဆားလေး ငရုတ်ကောင်းလေးရယ်၊ ပဲ ငံပြာရည် အကြည်လေးရယ် နဲ့ ဒီတိုင်းစားလည်း အိုကေတယ်။ (ကြက်တုတ်ကွေးရာသီမှာတော့ မစားသင့်)
၅) ဆီအိုးတည်ပြီး ကြက်ဥဖောက်ထည့် ဆားလေးထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပြီးမှ ကြော်တာကို ဘိုးသိုးဘတ်သတ်ကြော်လို့ အိမ်မှာခေါ်တယ်။
၆) အချပ်ကြော်ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားပါနော့။
၇) ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် နည်းနည်းနဲ့ ဟင်းရည်တည်။ ဆူလာမှ ပန်းကန်ထဲက ခလောက်ပြီးသား ကြက်ဥကို လောင်းထည့်ရင် အဆုပ်အဆုပ်လေးတွေနဲ့ ကြက်ဥဟင်းရည်ရရော၊ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ သောက်လို့ကောင်းးးးးးး။
ခလောက်ထားတာကို ပန် မှာ ပါးပါးလေးတွေ ကြော်၊ ဆီနည်းနည်းနဲ့။
ပြီးရင် လိပ်လို့ ရတဲ့ အနေညှပ်ထား
ခါချက်ဥ၊ သခွါးသီး ကို အရှည်လိုက် ခြစ် ထားတာနဲ့ ထည့်လိပ်။
ပါတီကြက်ဥတဲ့။ သိချင်ရင်တော့ အထက်ပါ လင့်မှာရှာကြကုန်။
ကော်ပီ/ပေ့ လုပ်လို့မရလို့ လင့်ကိုပဲ ညွှန်းလိုက်တော့မယ်။
သိသလောက်လည်း ကေဇီကို ပြန်မျှကြပါဦးးး
ငါ့ခြံထဲမှာ ဥတဲ့ ဥ
ငါ့ ကြက်မရဲ့ ဥ
အတင်းဝင်ကောက်တဲ့ ဟိုဘက်က ဂျပု
မင့် ကြက်အထီးက မဥတဲ့ ဘ၀
မင်းမကျေနပ်ရင် ကိုယ်တိုင်ထိုင်ဥ ဟ…။
ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲကြာကြာ ဒုတိယဖြစ်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။
ဥအကြောင်းဖတ်ရင်းနဲ့ မူးလာလို့ ရှိတဲ့ဥလေးကိုပဲ ကြော်စားလိုက်ပါတယ်
ဥနဲ့စား လွန်စွာမှကောင်း၊ သူတို့အပြော ပူရီဆိုလားပဲ
အဲ။ ဒုတိယ ကော်မန့်ပေါ့နော်။
အဲဒါဆိုလည်း ကြက်ကြော်လေး ကြော်ကျွေးပါ။
နံပြားနဲ့ကြက်ဥနဲ့ ပေါင်းရင် ပူရီ ဟုတ်လား??
ကိုရင်စိုင်း မဟုတ်က ဟုတ်က!
ဥ တွေအကြောင်း စားကောင်းစရာ. . .
ကြက်ဥ ဟင်းချို ***
ရေနွေး လီတာဝက်လောက်ကိုဆူအောင်တည်ထားပါ ။
ဆား အနည်းငယ် ၊ သံပရာသီး or ရှောက်သီး or
အခြားသော လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် အသီးချဉ်ရည်တခုခုကို ထည့်ပါ
ရှောက်ရွက်အနည်းငယ်လှီးထည့် ၊ ပြီးရင် အဓိကထည့်ရမှာက
ငရုပ်သီးစိမ်း ၁၀ တောင့်လောက်ကို ထက်ခြမ်းခွဲထည့်ပါ ။
ပွက်ပွက်ဆူပါက အရသာမြည်း၍ စိတ်ကြိုက် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် လေးရပြီဆိုပါလျှင်
ကြက်ဥတစ်လုံးကိုခေါက်ပြီး ထည့်ပါ ။
ကြက်ဥထည့်စဉ်ဟင်းချိုအား အဆက်မပြတ်မွှေပေးပြီးလျှင် ဖြေးညှင်းစွာထည့်ရပါမည် ။
ဤတွင် နယ်စည်းမခြား အဖွဲ့ဝင်နို့အကြိုက် ကြက်ဥချဉ်စပ်ဟင်းချို ရပါပြီ
အချိုမှုန့်တို့ ဟင်းခတ်မှုန့်တို့ကတော့ မိုက်သလောက်ထည့်ပါလေ
ဒါက ဦးဆာရဲ့ ဥ ပေါ့။
ဥ ကို အလွယ်ဆုံးချက်နည်း ရွာထဲမှာ တင်ဖူးတယ် ..
လင့်ရှာပြီး ပေးအုန်းမယ် .. ဒီကကော်နက်ရှင်က ရှာရတာ သိပ်ခက်တယ် …
Wei’s Cook ထဲမှာတော့ တွေ့ဘူးတော့။
တဂ် မှတ်မိလားးး ဝေ?
အရင်ကဟာဆို မသိလိုက်လို့။ ငုံးဥကိုပဲမှတ်မိလို့ပြန်ရှာထည့်ထားတာ။
လွယ်တာမှ မီးဖိုလဲမလို အိုးလဲ မလိုပါဘူး။ ကြွေပန်းကန် အနေတော်ထဲမှာ ဆီနဲနဲသုတ်ပြီး ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်လိုက်တယ် … ဆားနဲနဲထည့်လိုက်တယ် .. ပြီးတော့ မိုက်ခရိုဝေ့ထဲ ထည့်ပြီး ၂ မိနစ်ထားလိုက်ရင် ကြက်ဥကြော်ဖြစ်သွားပါပြီ …
မနက်စောစော မနက်စာကို ပေါင်မုန့်ထဲညှပ်စားရာမှာ အလွန်အဆင်ပြေပါတယ် … အိုးမဆေးရဘူး .. အညှော်လဲမခံရပါဘူး ..
(Credit to Wei Wei)
ဒါက နောက်တစ်နည်း .. အဲဒါက သိပ်မလွယ်ဘူး .. ပညာသားပါတယ် ..
ကြက်ဥကြော်ဆိုတိုင်း သိပ်လွယ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး …
အနော်ယဲ စမ်းကြည့်ဦးမယ် မမ ကေဇီကြောသလို ပြောရင်းနဲ့ ဗိုက်တောင်ဆာလာတယ်
နာ့ ပို့(စ) ကို လာဖတ်ပြီး စမ်းကြည့်မတဲ့။
၀ မရှိပဲ ၀ိ လုပ်ချင်တဲ့ ချွိချွိ…
ဟင်း မချက်တတ်ပဲ ချက်နည်းပို့စ်တွေ အမြဲတင်နေတာဂို ပေါဒါဘာာာာ
ဟင်းချက်ပျင်းတိုင်း ဥ ပဲ ပြေးပြေးဆွဲတာ….. အိမ်မာ CP ကြက်ဥ ကတ်လိုက်ဝယ်ထားဒါကို ကြောဒါ…
ဒါဗြဲ သညားလဲ အုကွဲ သိုက်ပျက်အောင် လုပ်တတ်တယ်… စာခေးသိုက်တွေ ငယ်တုံးက တုတ်နဲ့ ထိုးချဖူးတာ ကြောဒါဘာ
နောက်ကလိုက်ပီး ပေါက်ကရ ကြော မယ် မကြံနဲ့… (ခွက်ဒစ် ပို့စ် ပိုင်ချင်ဂျီး) :boss:
နာ့ ကို ဝ မရှိပဲ ဝိလုပ်တယ်လို့ ပြောရဲတယ်ဟွတ်လားးး
ဒီမှာ ရှိလို့ပဲ ရှိသမျှ ဥတွေ ချက်ပြနေတာလေ။
သများက သူများတွေလို ဝ မရှိပဲ ဝါး/ဝိုး/ဝေါင်း မလုပ်တာ။
အဲဒီ ဝ တွေ ခွဲလိုက်မယ်။
တူညား ဥ တွေအငှားချက်နေပီးတော့မြန်းးးး
၀ ဒွေခွဲပီး ဘာချက်မာလဲ ငင်င်င်င်
ချက်တယ်ပြုတ်တယ် ဖုတ်တယ်ကင်တယ် ကြော်တယ်လှော်တယ်
ဒီပို့စ် မှာ နည်း နှစ်မျိုး လိုနေတယ်
ကြက်ဥကို ဘယ်လို ဖုတ်မလဲ
ပြီးတော့ ဘယ်လို လှော်မလဲ
(ကင်တာကတော့ လွယ်မယ်ထင်လို့ ပြောတော့ဝူး)
အပေါ်က နှစ်နည်းနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်သလားဆိုတာ ချိကွတ် (chief cook) များ ဖြေပေးပါကုန်
ကိုယ့် ဥနဲ့ ကိုယ် စမ်းကြည့်လိုက်လေ….
ဈေးက ဝယ်ပြီး အိမ်က မီးဖိုမှာ။
ဖုတ် တက်စရာမလိုဘူး၊ ဖုတ်ချင်စိတ်လေးရယ်၊ ဘယ်လိုဖုတ် ကောင်းမလဲသိဖို့လိုတယ်
ဖုတ် ပီးရင်တော့ လှော်လို့ရပါပြီ
အဲ့ဒါကြောင့် နံပြားရိုက်တော်သူတွေ၊ နံပြားကို ကောင်းကောင်းဖုတ်နိုင်သူတွေ
ဆီပူပူနဲ့လှော်ရတဲ့ ပလာတာ ဆရာတွေဖြစ်ကုန်ပါလား
တစ်ချိန်လုံး ဥ စားနေတဲ့ ဥကြိုက်သူတစ်ယောက်ကို ချက်ကျွေးဖို့ ဒီပို့စ်ကို ကူးထားလိုက်ပါကြောင်း..
နာ့ ညီမလေးမှာ အများကြီးပဲ…
တြောက်တည်းပါပဲရယ်.. နှစ်ယောက်လိုချင်တာ..မရလို့.. ဟီး.. နောက်တာ..
ဘာစားချင်လဲ လို့ မေးကြည့်မိပါတယ်.. ဂေါ်ဖီရယ်၊ ဥနီရယ်၊ ဟို ပြောင်းဖူးသေးသေးလေးတွေရယ် ရောကြော်ထားတဲ့ အရွက်ကြော်နဲ့ ဘဲဥပြုတ်သုပ် တဲ့..
နှစ်မျိုးစလုံး အနော်မကြိုက်တာတွေချည်း.. အရွက်ကြော်ကမှ စားသေးတယ်.. ဘဲဥပြုတ်သုပ်က လုံးဝကို မစား..သူကတော့ ပြောသား.. လုစားစရာ မလိုဘူးပေါ့ တဲ့..
ကြက်ဥကို မကျက်တကျက် ကြော်တာလေးဘဲကြိုက်တယ်…
Half- Fried Egg ပေါ့ မွအိ။
Half-boiled Egg မကျက်တကျက်ပြုတ်တာတော့ မကြိုက်ဘူးးး
++ ကြက်ဥကို ကြက်အောင်ပြုတ်… ပြီးတော့ ခရင်းတို့ ဇွန်းတို့နဲ့ခြေ… ပြီး မရောနိစ်နဲ့မွှေ.. ပေါင်မုန့်မီးကင်ထဲညှပ်စား… တများတော့အရမ်းကြိုက်… :))
++ နယ်ကအစ်မချက်ပေးတာတော့ ဘဲဥကို အလုံးလိုက်ကြော်.. ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ..ကြက်သွန်နီ.. ဂျင်းအနှစ်များများနဲ့ပြန်ချက်.. သကြားနည်းနည်းထည့်တယ်.. မကျည်းနှစ်ရည်နဲ့.. အဲလာလည်းကြိုက်တယ်.. :loll:
++ နောက်တယောက်ကတော့ အလုံးလိုက်ပတ်လည်မွှန်း… ဆီသတ်.. ငါးငါးပိရည်နည်းနည်းထည့်သတ်.. မီးပြင်းပြင်းဆီပူတိုက်..ရေနည်းနည်းထည့်… ဆီထပ်ပြန်တော့မှ မကျည်းရည်ထည့်ပြီး ကြာကြာချက်… အာ့လည်းကြိုက်တယ်..
++ နောက်တခုက ၀က်သားတုတ်ထိုးချက်တဲ့အထဲထည့်ချက်ထားတဲ့ဘဲဥတုတ်ထိုး.. အဲဒါလည်းကောင်းသား
++ နောက်အစ်မတစ်ယောက်ကတော့ ဘဲဥငံပြာရည်ကြော်.. ကြက်သွန်များများပါးပါးလှီးဆီသတ်.. ငရုတ်သီးအကြမ်းဖတ်နည်းနည်းထည့်… ဘဲဥဖောက်ထည့်.. ငံပြာရည်ထည့်.. ကြက်သွန်များရင် စားကောင်းတယ်..
အနားသား ဥ စပယ်ရှယ်လစ်ပါတကားးးးးး
ကျန်သွားတယ်.. ဦးဆာနည်းလည်းမှတ်သွားတယ်… အရမ်းလွယ်ပြီး.. စားကောင်းမှာလည်းသေချာလို့.. :))
” Egg (ကြက်ဥ) Mixer ”
ဆား၊သကြား အနေတော်ကို သံပုရာညှစ်ပီး ရေခဲတုံးလေး ၂/၃တုံးနဲ့ ရောနှပ်ထား
စလုပ်ရမှက ကြက်ဥကို ဂွပ်ခနဲခွဲပီး မော့သောက်လိုက်၊
ပြီးရင် ခုန သံပုရာ ချိုချဉ်အေးကို မော့သောက်လိုက်၊
ရေခဲတုံးတွေ မစားလိုက်နဲ့ ….
အစပ်ကြိုက်တတ်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်း ၅တောင့်လောက် တပြိုင်တည်း ဝါးပီးစား၊
ပီးမှ ရေခဲတုံးကို အစပ်ပြေ ဂျွတ် ဂျွတ်နဲ့ ဝါး
အဲ့လိုဆို ဗိုက်ထဲသွသူ Mixing ဖြစ်သွားပီ
ပီးရင်တော့ ပူ………ဆိုပီး အီးတလုံးလောက် ကျယ်ကျယ်ပေါက်လိုက် ခပ်အက်အက် အနံ့လေးရရင် ကြက်ဥ Mix ရပီ …..။
အနံ့ပြင်းတာ ကြိုက်သူများ ဘဲဥသုံးပါ
ရွဲ့ စီ လုပ်နေကြနေမှာ….
အိုက်လိုမှန်းတိ ချွိချွိကို အာလူးကတ်တလိပ်လုပ်နည်းအရင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲထဲမလဲ ဥနဲ့ပဲ။ ကိုရီးယားကြက်ဥလိပ်လဲကျန်သေးသလေ့ချွိချွိရေ။
အာလူးကတ်တလိပ်လုပ်နည်းပို့ပေးမယ်။ ကြက်ဥလိပ် ကပုံနှင့်တကွပေးပါမယ်
ဘဲဥ ကြက်ဥ ငုံးဥ အကုန်ကြိုက်တယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဥ ချက်နည်းတွေ အတော်များများ သိထားတယ်လို့ ထင်ထားတာ…
ခုမှပဲ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်ဖြစ်ကြောင်း သိရတော့တယ်။
ရွာထဲလည်း ဥ စပယ်ရှယ်လစ်များသလေလေ့ မမရေ..
ဥ- ကိစ္စမှာနောက်ကျနေတာခွေးလွှတ်ပါဗျာ… :loll:
ကျုပ်လူပျို ဘွက ကွကိုယ် ချက်စားလေ့ရှိတဲ့ ဥ ချက်နည်းလေးက….
ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပီး တောက်တောက်ထပ်စင်း(အဖတ်လိုက်ကြီးတွေဆို အနှစ်မဖြစ်လို့)
ကြက်သွန်ဖြူ ဒါးပြားရိုက် တောက်တောက်စင်း
ခရမ်းချဉ်သီးတောက်တောက်စဉ်းးး(သို့) မန်ချည်းမှည့်နဲနဲဖျော်… စတာတွေကို ဆီသတ်။
အရောင်တင်၊ ဆနွင်းထည့်၊ ဆားထည့်၊ အချိုမှုံထည့်….
နဲ နဲ ဆီပြန်လာရင် ရေ နဲနဲအရင် ထည့်လိုက်။ အဲ..အနှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့
ဘဲဥဖြစ်ဖြစ် ကြက်ဥဖြစ်ဖြစ် ခါးလယ်ကို ဇွန်းဇောင်းနဲ့ခေါက်ပြီး ဒီတိုင်းဖေါက်ထည့်လိုက်….
အနှစ်မကွဲထွက်သွားအောင် သတိထားပြီး ဟင်းအနှစ် နှံ့အောင်လုပ်။ မဆလာ အနံ့ကြိုက်ရင် ထည့်လို့ရပါပြီ။…..ထမင်းနဲ့နယ်စားရန်အသင့်ပါပဲ…ခိခိ ရေးရင်း သွားရည်တောင်ကျလာပီ
အရသာကောင်းမဲ့ ပုံပဲ မိုက်မိုက်။
ကျနော့ ကြော်ချက်နည်းနဲ့ ဆင်တယ်။
ဒါမဲ့ ကျနော် ဒီတိုင်းချက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးးး
ရပါတယ်ကေဇီရယ်..အကာနဲနဲပဲ ကြေသွားတတ်တာပါ…ဖေါက်ထည့်ပီးတာနဲ့ ဘေးနားက အနှစ်ရည်လေး ဇွန်းနဲ့ခတ်ပီး ဥပေါ်လောင်းလောင်းပေး..ခဏလေးနဲ့အပေါ်ကြောတင်းသွားရော..
ဥဆိုလို့.. ငှက်ကုလားအုတ်ဥကို.. ပြုတ်စားဖူးတယ်..
A balut or balot isadeveloping duck embryo that is boiled alive and eaten in the shell. It is commonly sold as streetfood in the Philippines. They are common food in countries in Southeast Asia, such as Laos (khai look ໄຂ່ລູກ in Lao), Cambodia (pong tia koon ពងទាកូន in Cambodian) and Vietnam (trứng vịt lộn or hột vịt lộn in Vietnamese). They are often served with beer. The Tagalog and Malay word balut (balot) means “wrapped”.
နိုးပါ… ယွန်စရာ ကြောက်စရာ… :hee:
ကျနော်တို့ သင်္ဘော Ho Chi Min City ဝင်တုန်းက ၊
သင်္ဘော ဘေးမှာ လှေနှင့် လာရောင်းတာ ။
ဘဲဥ လို့ထင်တာဘဲ ၊ Embryo အဆင့်တောင် မကဘူး ၊
အမွေး အတောင် အစုံအလင် နှင့် ဘဲဥပေါက်ခါနီး ဆဲဆဲ ၊
အဲဒါကို ပြုတ်ထားတာ ။
ကျနော်တို့ သင်္ဘောက Deck Fitter ဗီယက်နမ် က ဝယ်စားတာ ၊
ကျနော့် ကိုတောင် ဝယ်ကျွေးသေးတယ် ။ မစားခဲ့ပါဘူး ။
အားသိပ်ရှိတယ် ဆိုဘဲ ။
အဲဒီဘက်ကတော့ အမျိုးသား ဟိုဟာဒီဟာ အားဖြစ်တယ် ဆို ဘာမဆို စားတာပဲ။
အဘပြောတဲ့ ဗီယက်နမ် ဘဲဥကို ကျောင်းနေဘက်တစ်ယောက်ကောင်းမှုနဲ့စားဖူးပါတယ် ။ အဲတာကျွေးတဲ့နေ့က ကျောက်စ်လိုအစားသရမ်းတောင် မစားရဲလို့ မျက်စေ့မှိတ်ပြီး မြိုချရတယ် ။ အထဲမှာအကောင်ပေါက်လေးနဲ့ ၊ အဲတာကို သံမနိုင်ကျောက်မနိုင်လိုအရွက်ရယ် ငရုပ်စိမ်း ကြက်သွန်ဖြူရယ်နဲ့စားတာ ခင်ဗျ ။ အားရှိတာတော့အမှန်ပဲ ၊ ဗီယက်နမ်တွေကတော့ တကူးတကကိုမှာစားတယ် ။ နောက်တော့လည်း မောင်ကျန်တတို့ဖြစ်ရော…
မသေသေးတဲ့ ဘဲ သန္ဓေသားတွေကို အရှင်လတ်လတ်ပြုတ်စားခြင်း
မျိုးအောင်ထားတဲ့ ဘဲသန္ဓေသားကို balut လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ရေပူထဲမှာ သူတို့ကို ထည့်ပြုတ်ထားကြပေမယ့် အသက်ရှင် သန်နေတုန်းပါပဲ ။ ဒီလို မျိုးအောင်ပြီးအကောင်ပေါက်လုနီးနီး ဘဲဥ တွေကို ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာတချို့က လမ်းဘေး ဆိုင်တွေမှာတော့ ပရိုတိန်းပြည့်ဝခြင်း ၊ စားသောက်ကောင်းတဲ့ လမ်းဘေးစာဖြစ်ခြင်း ကြောင့် balut တွေကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူတော်တော်များများစားသုံးနေကြတာဟာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို ဖြစ်လို့နေ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ အတော်လေးကို ရောင်းကောင်းပြီး ၀ယ်စားသူလည်းများပါတယ် ။ ဒီဘဲသန္ဓေသားပေါက်ကိုစားတဲ့ သူတွေဟာ ဆား ၊ ငရုတ်ဆီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဗီနီဂါ တွေရောစပ်ပြီး အချဉ်အဖြစ် တွဲဖက်စားသုံးကြပါတယ် ။
ဒီဥ တွေရဲ့ ဘေးမှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို အလွန်ပဲ မွှေးပျံ့တဲ့ရနံ့ ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲံအတွက် အထဲမှာရှိတဲ့ ဘဲသန္ဓေသားလောင်းလေးနဲ့ အကောင်ပေါက်လေးတွေကိုစားရတာ အလွန်သာရှိတယ်လို့ စားသုံး သူတွေက ဆိုပါတယ် ။ မျိုးအောင်ထားတဲ့ဘဲဥတွေရဲ့ အသက်အရွယ်ကိုကြည့်ပြီး ဘေးနားက အဖြူဖတ်တွေ ကို တော့သိပ်မစားကြပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အသက်နည်းနည်းကြီးလာရင် အရိုးနု တွေက စားရတာ နည်းနည်း မာလို့ဖြစ်ပါသတဲ့ ။
တစ်ခါမှ ဟင်းစပ်မပေးရဖူးလို့ အားနာနေတာ…ဒီတစ်ခါတော့ ..ဥ နဲ့ ပါတ်သတ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်…မိမိ အမျိုး မိမိစောင့်ရှောက်သင့်တယ် လို့ သဘော ပိုက်ပြီး ဥကြော်၊ဥပြုတ်၊ဥဖုတ်၊ဥသုတ်နဲ့ ဥပေါင်း နည်းတွေကို ဥစုံအောင် အားဖြည့်လိုက်ပါတယ်..
ဥေကြော် ၄မျိုး ပါ
၁။ sunny sideup( အနှစ် မကျက်ပဲ အကာ အဖြူလေးကျက်ရုံကြော်တာ အနှစ် အ၀ါေ၇ာင်လေးမြင်နေရပါမယ် )
၂။ over easy (က်ြက်ဥကို နှစ်ဘက်လုံး ဟိုဘက် ဒီဘက် ကြော်တာ..အထဲက အနှစ်မမြင်ရဘဲ နှစ်ဘက်လုံးဖြူ)
၃။ scrumble egg(ဥ ကို ခေါက်ပြီး တစ်စစီဖြစ်အောင် မွှေကြော်တာ ၀ါးပြီးပြန်ထွေးထုတ်ထားသလို အဖတ်လိုက်)
၄။ omelette (ဥကို ချိစ်၊ကြက်သွန်၊ခရမ်းချဉ်သီး၊၀က်အူချောင်း၊၀က်ပေါင်ခြောက်၊မှို၊ အစ၇ှိတဲ့ အသား အသီးအရွက်တွေနဲ့ရောပြီး အပြားလိုက် ဒါမှမဟုတ် အလိပ်ကလေးဖြစ်အောင်ကြော်တာ)
၁။hard boil or soft boil(မကျက်တစ်ကျက် နဲ့ အကျက်ပြုတ်တာ)
၂။poached egg (ေ၇နွေးထဲကိုဆား ရှာလကာရည်ရော ပြီးမှ ကြက်ဥ ဖောက်ထည့်ပြီးပြုတ်တာ အထဲက
၃။egg benedict (အပေါ်ကနည်း အတိုင်းပြုတ်ပြီး မှ ဟော်လန်ဒိုက်စ် ဆောစ့် ၀က်ပေါင်ချောက် မက်ဖင်န်တို့နဲ့
၁။shirred egg (ခပ်ပြားပြား ခွက်ထဲမှာ ထောပတ်ခံ ကြက်ဥကို ဖောက်ထည့် ကြိုက်တတ်တဲ့ ဆောစ့်
အသီးအနှံရောပြီး အိုဗန် သို့ ဘိင်န်းမယ်ရီ ထဲမှာ ထည့်ပြီး ဖုတ်တာ)
၁။nicoise salad (ကြက်သွန်နီ၊ အာလူးပြုတ်၊ခရမ်းချဉ်သီး၊ပဲသီးပြုတ်၊သံလွင်သီး၊ဆလတ်ရွက်၊တူနာငါးနဲ့ ဥပြုတ်တို့
၂။egg mayo salad (ဆလတ်ရွက်၊ ဂေါ်ဖိပါးပါးလှီး၊မရိုးနိစ်၊ကြက်ဥ ပြုတ်ခြေထားတာကို ရောပြီးသုတ်တာ)
၁။ egg seafood pudding ( ကြက်ဥ၊ ကြက်သွန်နီ၊ပုဇွန်၊ scallop၊ ငါး၊ခရု၊ ကဏန်းအသားနွင်၊ အာလူးပြုတ်
ချေတားတာကိုရော ခလောက် ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပေါင်းတာ)
၂။pounded fish egg roll (ကြက်ဥကို ပါးပါး အပြားကြီးကြီး ဖြစ်အောင် ခလောက်ပြီးကြော်၊ ငါး(ငါးဖယ် အကောင်းဆုံး)
အသား အရိုးနွင်ပြီး အစိမ်းကို ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်မြိတ်၊ စပါးလင်ရောထောင်း
စေးလာရင် ကြော်ပြီးသားဥပေါ်မှာ ဇွန်းနှင့် ဖြန့်  ပြီးရင် အလိပ်ကလေးဖြစ်အောင်လိပ်ပြီး
အထက်ပါ ဥ ကြော် ပြုတ် ဖုတ် သုပ် များ ကို နှစ်သက်ရာ ပေါင်မုန့်
စသည်တို့ ကြားတွင် ညှပ်သွင်းပြီး သုံးဆောင် နိုင်ပါကြောင်း မိမိ သိ သမျှ ရှိသမျှ ဥ များဖြင့် ၀င်ရောက် အားဖြည့် လိုက်ပါသည်။
ဆွေ!! ဆွေ နဲ့ နာမည်ကြီးနေတာ အလကားမဟုတ်ပါလားနော်။
ဒီ ကော်မန့်ကို ဖတ်မိတော့ ကိုယ် ဘာမှ မတတ်မှန်းသိသွားပါပြီလေ။
ဒါနဲ့ စကား အတင်းကာရောအဒမ စပ် တစ်ပတ်လောက် စားဖိုမှူး အဖြစ် မလာချင်ဘူးလားဟင်??
ကော်မန့်တွေရဲရဲတောက်နေတာကြည့်ပြီး ဝါးပေးထားတဲ့ နာမည်ပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
ဂလောက် .. ဟင်းချက်နည်းကျွမ်းတဲ့ ဘဆွေကို
(ဒါနဲ့ စကား အတင်းကာရောအဒမ စပ် တစ်ပတ်လောက် စားဖိုမှူး အဖြစ် မလာချင်ဘူးလားဟင်??)
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က လာခဲ့တယ်လေ….ရိရွန်းနားက ဟော်တယ်မှာတည်းတယ်…. ပုန်းနေပြီးတော..့
ကိုကျောက်ကပြောပါသေးတယ် ပြန်ခါနီးနေလို့ ဖုန်းမဆက်တော့တာ……
လာချက်ကြွေးမယ်လေ..တစ်နေ့ တစ်လုံးပဲပေး.. လက်မှတ်ကတော့ ညီမဆီကဓမြတိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်..ဟိ:mrgreenn:
ဒီရွာ က ထမင်းဆိုင်မှာ အရင် တစ်ပတ်စာလောက် ဟင်းစပ်ပြီး ချက်ကျွေးပါ ဆွေ။
ပြောင်းဖူးပင်မှာရှိတဲ့ ဂျိုးဥတို့ ဘာဥ ညာဥ အကုန်နှိုက်ကြတာ…….
တစ်ခါများ မြွေဥတွေ မှားပြီးနှိုက်လာလို့ အသက်ထွက်မတတ် ပြေးလိုက်ရတာ ကံကောင်းလို့…
ပြီးရင် ရသမျှ ဥတွေကို ရွှံ့တွေနဲ့ လုံး …မီးမွှေး မီးဖိုထဲ ပစ်ထည့်…… ရွံ့ခြောက်သွားမှ…
ခွာစား..ကောင်းမှကောင်း….. ကုလားပဲပင်တွေ အပင်လိုက်နှုတ်…. မီးဖိုထဲပစ်ထည့်…ပြောင်းဖူးတွေခိုး
ဖုတ်………. ဒါမိုးတွေ မမဂျီးမစားဖူးပါဘူး……. ကြုံမှ ခိုးနည်း ဖုတ်နည်း သင်ပေးမယ်..
ဥနည်းမျိုးစုံ..အဲလေ…. ဥချက်နည်းပြုတ်နည်းစုံပါတကားးး မှတ်သွားပီးးးးအိမ်က မဟေသီကို ဥခိုင်းအုန်းမှ…အာ….ဟုတ်ဘူးးဟ..ချက်ခိုင်းးးအုန်းမှ….
ဥကြောင်း.. သတင်းအချက်အလက်တချို့ကို …မေလ၂၀၁၄မဂဇင်းထဲတွေ့တာနဲ့.. ဘာသာပြန်ချင်နေတာလေး.. တင်ပေးလိုက်တယ်..။
တဂျီး ပြတဲ့ ပုံက ဘာမှမမြင်ရပါလားးးး
ကြက်ဥ ဘဲဥ ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥတွေက သွေးတွင်း မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို မြင့်တက်စေတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကြောင့် စားရမှာ ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ တွေကို အသင့်အတင့်စားပေးမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ် –
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥစတဲ့ ဥအမျိုးမျိုးမှာ လူတင်နဲ့ ဇီဇန်သင်းစတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တို့များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အသက်ကြီးချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မက်ကူလာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု (Macular Degeneration) နဲ့ အတွင်းတိမ် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ တစ်လုံးစားပေးရင် နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ဝေးဝေးမှာ နေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှု တစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥကို ပုံမှန် တစ်နေ့တစ်လုံး စားတာကြောင့် သွေးခဲနှုန်း၊ နှလုံးရောဂါထတာနဲ့ လေဖြတ်တာတို့ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေနိုင် လို့ပါ။
ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေက ကောင်းမွန်စေပါတယ်
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥအနှစ်မှာ ဗီတာမင် ဘီကိုလင်းဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် ဥအမျိုးမျိုးကို ဦးနှောက်အတွက် အစာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ နာ့ဗ်ကြောတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားကောင်းစေတာကြောင့်ပါ။ ကိုလင်းဓာတ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်မှာလည်း မရှိမဖြစ် အရေးပါ ပါတယ်။ သန္ဓေသား ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါလို့ပါ။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥစားတာက ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ တခြားလေ့လာမှု တွေက ဆိုပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥနှစ်လုံးအောက် လျော့နည်းပြီး စားတာက ရင်သား ကင်ဆာဖြစ်နှုန်း လျော့နည်းစေတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥမှာ ဆာလဖာ ပါဝင်တာကြောင့် အသည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းစေ တာ၊ ဗီတာမင်ဘီ စုပ်ယူအား ကောင်းစေတာ စတဲ့အာနိသင်တို့ကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဆာလဖာဟာ ကော်လာဂျင်နဲ့ ကီရာတင်တို့ ထုတ်လုပ်မှု ကောင်းစေတာကြောင့် အသားအရေကို လှပစေတာ၊ လက်သည်းတွေကို သန်စွမ်းစေတာနဲ့ ဆံကေသာကို တောက်ပစေတာစတဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥထဲမှာပါတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။
နံနက်စာအနေနဲ့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥကို စားပေးတာက အဝလွန်နေသူနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်များနေသူ တွေကို ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပေးနိုင်ကြောင်း လူဝီစီးယားနားပြည်နယ် တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှု အရ သိရပါတယ်။ နံနက်စာ အနေနဲ့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥစားတဲ့သူတွေက ကယ်လိုရီများတဲ့ အစာတွေကို လျှော့စားဖြစ်ကာ ကြာကြာဗိုက်ပြည့်စေလို့ ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဥနီကို သေးသေးလေးတွေတုံး၊ ကြက်သွန်မိတ် ( သို့ ) နံနံပင်ကို သေးသေးလေးတွေလှီး။ ကြက်ဥငါးလုံးကိုခေါက်၊ ဆားထည့်။ ကြက်ဥမွသွားရင် အစောကအစာတွေထည့်မွှေ။ မကပ်တဲ့ အိုးကို မီးပြင်းတိုက်ထား။ ဆီနဲနဲထည့် နှံအောင်လုပ်၊ မီးပိတ်၊ ကြက်ဥကိုပါးပါးထည့်၊ မီးပြန်ဖွင့် ပြီးရင်အောက်ကခဲပြီဆိုရင် လိပ်တော့၊ မျက်နှာပြင်မခဲစေနဲ့။ လိပ်ပြီးရင် ဒေါင့်ကပ်ထား။ နောက်ထပ်ကြက်ဥပါးပါးထပ်ထည့်၊ စောကလိပ်ထားတဲ့ကြက်ဥအောက်ထိရောက်အောင်ဖြန့်၊ ထပ်လိပ်၊ မီးကိုတော့ လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပေးရမယ်။ အဲလိုနဲ့ တထပ်ပြီးတထပ်လိပ်တာ အနဲဆုံးလေးထပ်ကနေငါးထပ်ထိ လုပ်။ နောက်ဆုံးအထပ်ကို ကြက်ဥနဲနဲပိုထည့်။ သူက အားလုံးကိုလှအောင်လိပ်ရမှာမို့။ အားလုံးလိပ်ပြီးရင်ပန်းကန်ပြားထဲထည့်၊ မျက်နှာပြင်မကျက်တဲ့ဟာက သူ့အပူရှိန်နဲ့သူကျက်ပြီးတထပ်ချင်းကပ်သွားလိမ့်မယ်။ ခဏနေမှလှီး။ ဒီလိုလှီးလဲရတယ်။ အသဲပုံလှီးလဲရတယ်
တထပ်ခင်းတိုင်းဆီလိုရင်နဲနဲထည့်။ နှစ်ထပ်လောက်တခါထည့်ရတယ်။ များရင်လဲမကောင်းဘူး။ မီးကတော့ တထပ်ချင်းဆီကြည့်ပြီးအတိုးအလျှော့လုပ်။ တူးရင်မလှဘူး
Credit to TNA
အဟိ သများဥ ဒီဥထဲပါတွားပါပေါ့။ အဟိ ဒဂျီးယူအုံးမဒဲ့လား ဒီထမင်းဆိုင်ကို။ :p:
ယူမှာပေါ့..။လောလောဆယ်တော့.. ဒီလအတွက်.. ကေဇီက.. ဒိုင်ရှိုဖွင့်ထားတဲ့ထမင်းဆိုင်ဟင်းအမယ်တွေရထားတယ်..။
ဂျပန်မီးဖိုထဲလုပ်ရင်.. အဲဒီအပေါ်ကလို..အုမ်းမလက် Tamagoyaki လုပ်တာပါတယ်..။
သင်တန်းမှာဆို.. ရေစိုနေတဲ့လက်သုတ်ပုဝါကို.. လေးထောင့်ဒယ်ထဲမှာ.. တူကလေးတဖက်ကိုင်ပြီး.. ဒယ်ကိုတော့ကာတော့ကာနဲ့..လိပ်ယူရတာ..။
တကယ်လည်းကြက်ဥလိပ်လုပ်ရော.. ကြက်ဥနှစ်က..ဖတ်ဆို..လက်ဖျံလာကပ်တာ.. ပူလိုက်သမှ.. တခါတည်းအပူလောင်တဲ့အထိ..။
ရှက်ဂျူးထဲက ယူတာတော့ မဟုတ်ဘူး မလားးးး
ဦးဆာရယ်၊ မွသဲ ရယ် ချက်တဲ့ ထမင်း အမျိုးမျိုးဟာ ပေးထားတာကို ယူတာဟုတ်??
ဒိုင်ရှိုဖွင့်တယ်ဆို သများ စားဖိုမှူးတွေ ကော်မရှင်တောင်း (အဲလေ ) စိတ်ကွက်နေပါ့မယ်။
ထမင်း အမျိုးမျိုးကို ပေးထားတာပါ။
ကြက်ဥလိပ် လုပ်ကြည့်အုန်းမယ် …
ကြက်ဥပေါင်းစလုပ်ပါပြီ။ ကြက်ဥတွေကိုရေဆေးပါ။ နောက်အိုးတခုသေချာအောင် စီစဉ်ပါ။ ကြက်ဥပေါင်းစက်ရှိသူများပြသနာမရှိပေမဲ့ မရှိသူများကတော့ ကြက်ဥ ထောင်ထည့်လို့ရအောင်၊ ကွက်တိဖြစ်အောင် ဇောက်နက်နက်အိုးကိုရှာပါ။ ကြက်ဥဘယ်နှစ်လုံးဆန့်လဲသေချာအောင်စီထည့်ကြည့်ပါ။ အိုးအောက်ခြေအကုန်ထိနေရမှာဖြစ်သလို ချောင်နေလို့လဲမရပါဘူး။ ( ကြက်ဥလဲသွားမစိုးလို့ )။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ကြက်ဥထိပ်ကလေးကို အပေါက်သေးသေးလေးထိန်းဖောက်ပါ။ အချွန်လေးတခုနဲ့။ ကျွန်မကတော့ ခရင်းလေးနဲ့ထိန်းဖောက်ပါတယ်။ ဆေးထိုးပိုက်ရဲ့ အပ်ပေါက်ထိပ်ကလေးဝင်ရုံထိန်းဖောက်ပါတယ်။ ( အပ်မလိုပါဘူး။ အပ်ထည့်တဲ့အပေါက်ပါ )။ ပေါက်သွားရင် ဆေးထိုးပိုက်နဲ့ ကြက်ဥတွေကုန်အောင်စုတ်ထုပ်ပစ်ပါ။ ကိုယ်ထုပ်လိုက်တဲ့ ကြက်ဥရည်ပမာဏကိုမှတ်ထားပါ။ ပြန်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ ချန်ထည့်ရမဲ့ပမာဏသိရအောင်လို့ပါ။ ဇလုံထဲကိုကြက်ဥအရည်တွေအကုန်ထုပ်ပြီး တဲ့အခါမှာ အသာအယာမွှေပေးပါ။ အမြှုပ်ထလို့မဖြစ်ပါဘူး။ မခလောက်ပါနဲ့။ ဆားလေးနဲနဲထည့်ပါ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးထည့်ပါ။ ( မီးခိုးရောင်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပါ )။ နှံအောင်မွှေပါ။ ကြက်ဥခွံတွေကို အိုးထဲ အတိစီထည့်ပါ။ ပြီးရင် ကြက်ဥအရည်တွေကို ပိုက်ကလေးနဲ့စုတ်ပြီးကြက်ဥခွံ တလုံးခြင်းစီထဲပြန်ထည့်ပါ။ ပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ထုပ်လိုက်တဲ့ ကြက်ဥရည် ပမာဏရဲ့ 5cc မှ 7cc ထိချန်ထည့်ပါ။ များသွားရင် လျှံထွက်ကုန်ပြီးပျက်သွားတတ်ပါ တယ်။ အားလုံးထည့်ပြီးရင် ကြက်ဥထိပ်ကလေးတွေကို ခြောက်သွားအောင် တစ်ရှုးလေးနဲ့လိုက်သုတ်ပါ။ ပြီးရင် တိတ်ကလေးနဲ့ အပေါက်ကလေးတွေကိုကပ်ပါ။ ကြက်ဥအောက်ခြေတွေ မတူးအောင် ကြက်ဥအိုးထဲရေးကလေးနဲနဲထည့်ပါ။ ပြီးရင် အဖုံးဖုံးပြီး ရေခံပေါင်းမည့်အိုးထဲရေထည့်၊ ကြက်ဥအိုးထည့်ပါ။ အဖုံးထပ်ဖုံးပြီး မီးအေးအေးလေးနဲ့ ၁၅ မိနစ်ခန့်ပေါင်းပါ။ အဖုံးဖွင့်ကြည့်လို့ ကြက်ဥလေးတွေ အပေါက်မှာ မြင်နေရပြီဆိုရင် ချပြီးရေအေးထဲစိမ်ပါ။ ပြီးရင်ခွာလို့ရပါပြီ။ မိမိနှစ်သက်သလို စိတ်ပါ။ သူများတွေကတော့ ပြန်ကင်ပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ ပြန်ကင်တာမကြိုက်တာမို့ ဒီအတိုင်းပူပူလေးကိုပဲ အချဉ်လေးနဲ့တို့စားပါတယ်။
ဘဲဥကိုငါးလုံးလောက်ကိုခေါက်၊ ပဲမှုန့်အစိမ်းနဲနဲထည့်မွှေ၊ ဆားနဲနဲထည့်၊ သမအောင်ခလောက်၊ ဆီပူပူမှာကြော်၊ လွှတ်ကောင်း။
နောက်တမျိုးက ဘဲဥကိုခေါက်၊ ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ကြက်သွန်နီကို ညက်အောင်ထောင်း၊ ငံပြာရည်ထည့်၊ နှံအောင်မွှေ၊ ဆီပူပူထဲထည့်ကြော်၊ ကောင်းမှကောင်း
Thank you, Chit Thel..